Mudara raTinashe Muchuri: February 2017
Mudondo rekwaMutatiri KwaZimuto
Zvinofadza kufamba uchiwana ruzivo rutsva. Regai vachenjeri vekare vakati chitsva chiri murutsoka. Vainge vaongorora vakaona zvokwadi kuti chitsva chiri murutsoka rwechokwadi. Kekutanga kusvika kumapani ekuZimuto nzvimbo isina makomo anoonekera asi wati iwo mapani kanhi nezvikomo zvidiki zvine michero inozipa. Kekutanga ndakadyawo tsvoritsvoto nembambara idzo ndainge ndajairawo kudya tiri kwedu kuZaka.
Mukubvu uri kufurura maruva
Musabwarabwabwa wave nemichero
Mbambara dzave kuibva
Chakata dzichiri kutanga
Mutobwe uri kufurura maruva
Mutobwe une michero
Michero yegavakava yaoma
Munzviru wave nenzviru
(c) Tinashe Muchuri 2017 02 04
- February 04, 2017 2 comments: Links to this post